By : doneti on Jan 13, 2010
Score: 107 Rating: 4.46 Comments: 48
လမ်းမခွဲကြေးနော်...လမ်းမခွဲကြေး..ကြေး.. ဟ..ဟ..နေပါဦးဟ... ပြောလို့တောင် မဆုံးသေးဘူး.. ထွက်သွားပြီ... :(
lovememore on Nov 14, 2010 0
ecomg on Sep 26, 2010 0
snowphyu on Apr 28, 2010 0
kg talayan mite talathan kyar ya aung vocal ko myint ya tar hehe5star naw
သိပါတယ်...သိပါတယ်... အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ..စိတ်ပျက်ဖို့ပါ... :P ကျေးဇူး..ကျေးဇူး.. :)
punttatkaya on Jan 27, 2010 0
တကိုးဆို ပိုမှန်တယ်ကွ...တာကော ကျတော့ အဒေါ်ကြီးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကြီး... :( Thanks... :)
har BBC VOA kyi.....mike hla kyii larr......good tal good tal sat lop
doneti on Jan 26, 2010 0
နားလည်ဘူး ဘာတွေ ရေးထားတာလဲ..အဓိပ္ပာယ် မသိလို့ သေချာ ပြန်ရှင်းပြပါ..
အဆိုတော်ကြီးတို့ကတော့ ပိုင်တယ်ဗျာ.. ပိုင်ပိုင်.. ပိုင်တောင် မြည်နေသေးတယ်.. ဂွတ်တယ်ဝေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး.. 5************** ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
တွမ်ခရု(Thank U) :P
lalaynge on Jan 19, 2010 0
သိပ်မကြားရတော့ နားထောင်ကောင်းနေသလိုပဲ..:P ******
လာပြန်ပဟ...နောက်တစ်ယောက်.... ကောင်းတယ်ဆို..ကောင်းတယ်နေရာမှာပဲ ရပ်ထားကြတာ မဟုတ်ဘူး... ဘာလို့ နောက်က အမှန်တရား(အသံတိုးတာ)ကိုပါ ထည့်ထည့်ပြောသွားကြလဲ မသိဘူး.. :P Thanks.. :)
crycupid on Jan 19, 2010 0
ဖြစ်နေရမယ်လေ...အဲလိုပဲ ကောင်းနေအောင် တိုးတိုးလေး ဆိုထားတာ.. :P ကျေးဇူးပါ.. :)
aungminhtun on Jan 17, 2010 0
Very nice! The only suggestion would be set your vocal volumeabit higher. It will definitely sound better.
love_generator on Jan 16, 2010 0
အသံက ဘယ်ပျော်သွားတာလဲ သိဘူး..နော့ (ဟီးဟီးစတာနော့) အသံလေး နဲနဲ ချဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းသွားမယ်ထင်တယ်...နော့
doneti on Jan 16, 2010 0
ဝုတ်ပဗျား..အားလုံးပဲ သိကြပါတယ်..ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းသိပါတယ်.. :) Thank U par.. :)
YinLiHoe on Jan 16, 2010 0
You sing really good . I am not sure because of your mic or recording . Siing more bro..
အဲတုန်းက ညဘက်ကြီးမို့လို့ အသံကိုတိုးတိုးဆိုတာ.. ပြီးတော့ Recording မှာလည်း mic ကို အသံတိုးထားသေးတယ်.. ဒါကြောင့်..ဒါကြောင့်.. (ဒါပေမယ့်..ကျယ်ကျယ်ဆိုရင် ဆိုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး) Thanks ... :)
SCH7677009 on Jan 15, 2010 0
inn arr lone pyaw tae atime athan toe nay tal...
doneti on Jan 15, 2010 0
hippo on Jan 14, 2010 0
Volume ကို အသားကုန်တင်ပြီး နားဆင်အားပေးသွားပါတယ် . . . ***** . . .
ဟီး.. :D.. ကျေးဇူးပါ... :)
sandy12 on Jan 14, 2010 0
.....Doneti lal...done lonelal....he........he.......kg par tal atan ne'ne myint lite yinpo kg par late mhar............**********4u ........sin more songs..............g
ဟုတ်ပဗျား...ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း အသံတိုးနေလို့ အားမရပါ.. Thank U! :)
turikimuriki on Jan 14, 2010 0
nice one ... sing more nor... 5* :)))))
minla on Jan 14, 2010 0
athan nal nal myint lite yin,a yan mite twr mhar.. akhu lal mite talt mite tal... listen ya tar toe nay lo.. :P
Ilovemusic on Jan 14, 2010 0
vocal ko...myint lite yin...po kg twar mhar....really nice to listen bar byar....bravooo.....5*4u byo.
susannyunn on Jan 14, 2010 0
vocal lay nel nel arr htet p.... mic vol lay increase pay par naw.. dar so... arr lone perfect pelz chint..great vocal par.....:)))))))))))))....BRAVO....:clap :clap :clap...>>>>>>,,,try more songz plz naw...>>
မြှောက်ပေးမှတော့ ...အူတက်အောင်က...အဲလေ...လိပ်ခေါင်းထွက်အောင် ဆိုရတော့မှာပေါ့ဂျာ... :P
aungkyawoo79 on Jan 14, 2010 0
a than toe par tal ..kg par tal ...***** for you..
တိုးလို့ ကောင်းတာ ဖြစ်မယ်....ကျယ်ရင် ကောင်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး... :P
name01 on Jan 14, 2010 0
can u sing it louder? :P good job. it would be better if u sang it louder. next time sing it louder ok?
ွှThank U foratrue advice.. :)
Phyogyi on Jan 14, 2010 0
GOod...telz... bro..ဒုံးတိနဲ့ ..အသံတိုးတိုးနဲ့ ဆိုသွားတဲ့ ..feature...ရောကောင်းပါတယ်ဗျာ...Sing more songs ..:)))))))))))))...5*****..for..bro..doneti and..sis.. .nar sin arr pay twar par telz byar..:))))....RPG>..
ဘယ် sis ကိုပြောတာလဲဗျ? တစ်ယောက်တည်းဆိုထားတာပါ ခင်ည... Doneti ကို ဒုံးတိ မှန်းသိတဲ့ အတွက် အရမ်းကိုလေးစားမိပါတယ်ဗျာ... :P
whitekisslay on Jan 14, 2010 0
Singss twer tar kaung par tal shin*********arrr payyy twerpar tal byot..
sithunaung on Jan 14, 2010 0
brother yay vocal ka good tal..music ka kyel twer loe.., arr pay twer per tal ..sing more song bro5**** for u
မှန်လိုက်တာဗျာ...အသံတိုးနေတာတော့ အမှန်ပဲ... စစချင်းဆိုတော့ အထာမနက်သေးဘူး... နောက်ဆို ပိုဆိုး...အဲလေ...ပိုကောင်းသွားမယ်လို့ ထင်တာပဲ.. :P
ngeloveuforever on Jan 14, 2010 0
အာ.. မိုက်တယ်ကွ။ တကယ့်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းဗျို့။ 5***** for you.
ဘာ"အာ"တာလဲဗျ? :P ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာဆိုမှန်းမကြားရလို့ စိတ်ညစ်နေတာဗျ... :(
aungtun1 on Jan 14, 2010 0
Nice One bro..... please sing some more songs... arr pay thwar par tal
paradise on Jan 14, 2010 0
ဟာ brother ရယ် မိန်းကလေးနေရာ ဆိုတာ တော်.တော်.ကို ပိုင်တာပဲ တကယ်ကြီးကို မိန်းကလေးဆိုထားတာ မှတ်နေတာ ဟိဟိ......so sorry par nort....နောက်တစ်ခါ မမှားရအောင် ပီပီ ပြင်ပြင် ကြားအောင်ဆိုပါ ပြီးရင် descirption မှာ ဘယ်သံ ညာသံ ဆိုထားတဲ. အကြောင်းလေး ဘာလေး ပြောပြမှပေါ. ဗျ ဂယ်ပဲ ဂယ်ပဲ......sing more song BROTHER>>>>>>:)))))))
Taw Tay lo.. D 1 khar tot Bro phyit twar tel... :P
sis yay...ko pine version ne' 1 yaut hte so twar dar....a taw lay ko mite mal.....duet lay so par lar....sisathan ne'ataw lite dal....arr pay twar par dal...a sone hti..********all star awarded...:))))))))
Arr tot nar par tel byar... Main Ma atan net so mi tar ko... But.. I'mamale.. Hee..Hee.. Nout 1 khar htet ma mharr net naw... Nout lu tway lel mharr ohn ma larr ma thi? :P